Itoophiyaan miidiyaa wolabaa ukkaamsuun addunyaarratti sadarkaa 4ffaa irratti argamti, jedha CPJn - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Itoophiyaan miidiyaa wolabaa ukkaamsuun addunyaarratti sadarkaa 4ffaa irratti argamti, jedha CPJn
Ardii Afrikaa irraa biyyoonni miidiyaa ukkaamsuun sadarkaa 10 jalqabaa irra jiran Itoophiyaafi Eertiraa qofa.
Dhaabbanni ‘Committee to Protect Journalism’ jedhamu gabaasa ukkaamsaa sagalee ummataa ykn miidiyaalee isa mootummootaan geggeeffamu ifa godhe. Gabaasni CPJ kuni kan agarsiisu uggura miidiyaatiin wolqabatee biyyoonni addunyaa sadarkaa maal irra akka jiraniidha.
Toftaan biyyoonni kunniin sagalee ummataafi miifdiyaa ugguruuf dhimma itti bayan keessaa hangi tokko: intarneetii too’achuu, miidiyaa daangaan alati gulaluu, gaazexessitootaaf hayyama laatuu diduufi doorsisuun keessatti argamu.
Akka gabaasa CPJtti, Itoophiyaan biyyoota sadarkaa ol’aanatti miidiyaa ugguran keessa jirti. Kan argamutus, bifa nama qaanafachiisuun, sadarkaa 4ffaa irratti. Itoophiyaa caalatti miidiyaa ugguruun kan hamaa ta’an Eertiraa, Kooriyaa Kabaatiifi Suud Arabiyaa qof. Ardii Afrikaa keessaa miidiyaa ugguruufi sagalee ummataa ukkamsuudhaan sadarkaa ol’aanaa irra kan jiran Itoophiaafi Eertiraa qofa.
Itoophiyaan kan miidiyaa, gaazexessitoota, dhaabbilee maxxansaafi kanniin raabsan (akkuma biyyoota biraa) tooftaa sodaachisuufi hidhuutti dhimma bayuudhaan. Halli miidiyaa wolabaa biyyattii keessatti hammaachuu irraa kan burqe, biyya ummata miliyoona 90 ol qabdu televiziyoonni wolabaa tokko dhabuunn isii ragaa guddaadha. Itti dabaluudhaanis, Ethio Telecom, hujii marsaalee intarneetii yaada mootummaa qeequ maxxansan jedhu hunda uggura, akka CPJ tti.
Mootummonni biyyoota kanniinii kan miidiyaa akkas ukkaamsaniif sababa tokko qofaaf: umrii angoo isaanii dheereffachuuf, akka gabaasa CPJtti.
Biyyoonni miidiyaa ugguruun addunyaa irratti sadarkaa 1ffaa hanga 10ffaa irra jiran kanniin asii gaditti tarreeffamaniidha.
ukkaamsaa sagalee ummataa
Previous articleCL: Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus marsaa itti aanutti dabran
Next articleBaqattoonni Somaaleefi Afgaanistaan 14 baaburaan Masedooniyaa keessatti ajjeefaman